နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: Bangkok Trip 1 ထွက်တော်မူ နန်းက ခွာတယ်...။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 7:45 PM
ကိုပေါ March 10, 2009 at 9:40 PM
တီဇက်အေသွားလိုက်၊ မောင်ဘွိုင်းဇ်သွားလိုက်နဲ့ အတော်ထူးတယ်။ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လို ဟစ်ဒင်းအာဂျင်ဒါတွေ ရှိနေသလဲ စနည်းနာဦးမှ။
MrDBA March 10, 2009 at 9:48 PM
khet myint myint March 10, 2009 at 10:01 PM
အပိုဒ်၆ကိုဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်က သတင်းစာမှာဒေါက်တာမတင်ဝင်း ရေးတဲ့သမိုင်းကြောင်းတွေ ပြန်သတိရမိတယ်။ ဗီဇာလျှောက်တဲ့အတွေ့အကြုံ ဝေမျှထားတာဖတ်၊မှတ်သွားပါတယ်။ ထွက်တော်မူနန်းကခွာတယ် နောက်အပိုင်းတွေမျှော်နေမယ်။
JuneOne March 10, 2009 at 10:11 PM
MrDBA March 10, 2009 at 10:15 PM
ထွက်တော်မူ နန်းကခွာတယ်ဆိုတော့ ပြန်ကောလာဦးမှာလားဗျ
ကလူသစ် March 10, 2009 at 11:10 PM
ksanchaung March 10, 2009 at 11:47 PM
ဖြူဆုတ်လိုလို ၀ိဇ္ဖာမောင်ပိန်လိုလို အဲ ညိုမြလိုလို သိပ္ပံမောင်ဝလိုလိုနဲ့ အရေးအသားကတော့ ဖိုးသခွါးပဲ။
khin oo may March 10, 2009 at 11:56 PM
(ထိုနေ့က သူ အလွန် အလုပ်များနေလေသည်။ )
အလုပ်က များတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ များချင်ယောင်ဆောင်တာပါ။ အရင်နေ့များက လည်းဘာ မှ မလုပ်ခဲ့၍ဖြစ်သည်။ များမှာပေါ့ ။ တစ်နေ့လုံးချက်နေတာကိုး. ဟိုဝင်လိုက် ဒီဝင်လိုက် ။ ဟိုဖတ်လိုက် ဒီဖတ်လို့က်လိုက်. ဟိုယောင် ဒီယောင်လုပ်နေလို့ ပြန်ကာနီးမှ တိုက်သုတ် ရိုက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ။် ရှင်းပါတယ်နော်။
(ရုံးမှ ၅ နာရီထိုးသံ ဒင်ဒေါင် တစ်ချက် ကြားလိုက်လေမှ ဟိုက်ကနဲ ဖြစ်မိချေသည်။ )
စီပုံးမှာ ပြောတုံးကတော့ ပုံ မှန် ၆ နာရီအထိ ရုံးမှာ အလုပ်လုပ်လုပ်ရပါတယ်ဆို။ ရုံ့းချိန်က ခြောက်နာရီအထိပါဆို။ စကထဲ ကလွဲတာဘဲ. .
(လမ်းတစ်လျှောက် တွေ့သောလူကို လိုက်လံနှုတ်ဆက်)
ကျှွှန်တော် အကောင်းစားကလေး နာမည်ကြီးကလေးမောင်ဘွီိုင်း ဘန်ကောက်သွားလိုက်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာ. ဘာမှာကြဦးမလဲခင်ဗျ.။ အော်.သိတ်မကြာပါဘူးဗျာ. စိတ်ကလေး ညောင်းနေလို့လမ်းလျောက်ထွက်မလို့ပါ. ဟုတွေ့သမျ လူကို လိုက်ံလံ့်ပြောဆိုနေလေ၏။
ထိုအချိန်န ဖုံးမြည်လာပစေ (ထိုဖူံးမှာ TZA နင့် ကြိုရိုက်ထားသော အကွက် ဖြစ်၏။ ဖုံးကိုကောက်ကိုင် ကာ အရေးကြီးသော အမှူအယာာနင့် အရမ်းအလုပ်မျှားသယောင်ဆောင် ကာ ပေါက်တတ် ကရ လျောက်ပြောရင်းနှင့် ဆက်လက် လမ်းလျောက်သွားရာ ဘေးက လူများမှာ ပါးစပ် အဟောင်းသားဖြင့် ငေးမောအားကျ ကာ အထင်ကြီးမိကြလေ၏၏၏၏
(လုပ်လက်စ အလုပ်များ ဖြတ်သင့်တန်ဖြတ်၊ ရွှေ့ဆိုင်းတန်သင့် ရွှေ့ဆိုင်းရ၏။ ဤမျှလောက် လုပ်နေသည့် ကြားမှပင် အားဂျင့်ဟုဆိုကာ အဆောတလျင် မနှေးအမြန် လာပါဟု တစ်ဂျီဂျီ ခေါ်လိုက်၊ ရာဇသံ ပေးလိုက် လုပ်နေသော ဖေါက်သည်များကို ).............(ဟမ်) ဟု အလန့်တကြားရေရွတ်ပါရန်။
တသက်လုံးက ဆည်းပူးထားသော ထိုင်းမြန်မာ သမိုင်းကိုလည်း ပို့ချသွားသေးလေ၏. သူ့အကွက်ဝင်သွားသောကြောင့် စာဖတ်ပရိသတ်များမှာ အငိုက်မိသွားကြလေသည်။
တဖန် (နတ်မိမယ်တို့ ပျော်စံရာ ကုန်းထက်တွင် ပို၍ ဈေးချိုသည်ကို သတိပြုပါလေ။ ) .... ([ဟမ်) again
ခြုံကြည့်ရရင်တော့ အတော်ကလေး ကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရေးထားတာဘဲ ဆိုတာ ကို သုံးသပ်ရရင်ဖြင့် ....ရှေ့ဆက် ရမည့်ရက်ပေါင်း သုံးဆယ် အတွဲ ၂၀ ကို တွေးမိကာ သက်ပြင်းချသွားမိပါကြောင်း...........
ကြည် March 11, 2009 at 12:11 AM
အစ်မတော်နဲ့တွေ့ခဲ့လား။ အရင်က ထရန်ဆစ်ဗီဇာကိစ္စဗဟုသုတရသွားပါတယ်။တဆက်ထဲ သဘောင်္သားတွေ ထိုင်းမှာ ပွဲစားတွေညာလို့ သဘောင်္မတက်လိုက်ရပဲ ပြန်လာရတဲ့ဇတ်လမ်းလေးကို သွားသတိရမိတယ်။ စာတွေတော့ ရေးထားတာအားကြီးပဲ ..ပုံကျတော့မတင်ဘူး။ တင်တော့လည်း မျောက်သုံးကောင်တဲ့။ ကောင်းသေးရဲ့လား။ ဆက်ရန် များကို ဓါတ်ပုံနှင့်တစ်ကွ ဝေေ၀ဆာဆာ တင်ပြပါရန်......
juli March 11, 2009 at 10:00 AM
ထွက်တော်မူနန်းကခွာ အကျဉ်းချုပ်မှာသိရှိပြီးဖြစ်၏။ ယခု အကျယ်ချဲ့ဖတ်ရှုရ၍ ကျေးဇူးတင်ပါ၏။ ထိုနေ့ညနေ၅နာရီခန့်က ထိုနေရာတဝိုက်တွင် တယ်လီဖုန်းတစ်လုံးဖြင့် ဟိုဖက်ပြေးလိုက်ဒီဘက်ပြေးလိုက် ဟိုဟာနှိုက်လိုက် ဒီဟာနှိုက်လိုက် လုပ်နေသော MAD တစ်ယောက်တွေ့မိသည်ဟု ပြောသံကြား၏။
ပို၍ဈေးချိုသော နတ်မိမယ်များ အကြောင်း ကိုလည်းစောင့်မျှော်နေပါ၏။ (ဟမ်-မမKOM)
ကြည်.. မျောက်သုံးကောင်ရဲ့အောက်က credit ကိုကြည့်ပါ..ပုံထဲကပိုင်ရှင်ကို ခွင့်တောင်းထားတာ
NangNyi March 11, 2009 at 10:42 AM
ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် ဗျာများနေသော ခပ်ချောချော ငနဲကို တွေ့လျင် အကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လိုက်ကျော်ကြီး မောင်ဘွိုင်းဟုသာ .. တဲ့.. ခွိ ခွိ
khin oo may March 18, 2009 at 2:13 AM
ဒ့ါပေမဲ့ ကလန်းမန်းတီးမှာ ရေလျှံ့သွားတယ်။
ပြည်စကားက မလိုင်လုံဝယ်နေတုံး လိမ်မော်ချစ်သူ ဖလက်ပြသွားတယ။် ဒီညတော့ ပေါက်သီချင်းဆိုနေတာနဲဘဲ ပွဲ့သိမ်းလိုက်မယ။်
Unknown May 25, 2009 at 2:20 PM
"နိုင်ငံကူး လက်မှတ် လာယူပါရန် ချိုသာသော အပြုံးပိုင်ရှင် မမ၏ စကားသံကို နားဝင်ပီယံ ရှိလောက်အောင် ကြားရပြီး သကာလ"
မှန်တယ်ဗျို့ ၊ ထိုင်း embassy က မမ နှစ် ယောက် က သောက်ကရမ်း လန်းတယ်ဗျို့ ၊ အသံ ကလည်း ချိုမှချို